सेक्स Archives - Nepalpatra
एजेन्सी । कोरोना भाइरसको समयमा यौन सम्बन्ध राख्दा कस्तो असर पर्ला भनेर प्रश्न पनि गर्छन् । तर वैज्ञानिकहरुले कोभिड-१९ यौन सम्बन्धको माध्यमबाट सर्ने कुरामा कुनै प्रमाण हालसम्म फेला नपरेको बताउँछन् । कोरोना संक्रमणको समयमा बेलायत सरकारले यौन सम्बन्धलाई लिएर एडभाइजरी नै जारी गरेको थियो । उक्त एडभाइजरीमा सरकारले कुनै एक पार्टनरलाई पनि कोरोना संक्रमण देखिएको […]
महत्वपुर्ण हेल्थ टिप्स: यस्तो छ पहिलोचोटि सेक्स गर्दा अपनाउनुपर्ने बिधिहरु !
जीवनचक्र चलाउने माध्यमसँगै प्रेम अभिव्यक्त गर्ने उत्तम उपहार पनि हो, यौन । तर यौन शिक्षाको अभावमा कतिपयको पहिलो प्रयास पीडादायी बन्न पुग्छ । ज्ञानको अभावमा शारीरिक तथा मानसिक दुवै रुपमा पीडादायी हुन सक्छ । तनाव हुनसक्छ । पुरुषमा शीघ्रपतन, लिंग योनिभन्दा बाहिरै रहने हुनसक्छ । जथाभावी यौन सम्पर्क गर्दा महिलाको योनी दुख्ने, घाउ लाग्ने पनि […]
हरेक पुरूषको तुलनामा महिलाको सेक्स टाइम बढि हुने गरेको पाइन्छ । अधिकांश मानिसहरुमा जान्ने इच्छा हुन्छ कि सेक्सलाई कति समय दिने अर्थात एक पटकमा कति मिनेटसम्म सेक्स गर्नुपर्छ ? यसको कारण भनेको सेक्सलाई लिएर थुप्रै मानिसमा शंका उत्पन्न भएको हुन्छ । भर्खरै कैयौ महिलाहरुसँग यस बारेमा गरिएको कुराकानीबाट आश्चर्यजनक खुलासा भएको छ । सर्वेक्षणमा महिलाहरुलाई […]
एजेन्सी, एक नयाँ अध्ययनका अनुसार, महिला आफ्नो पार्टनरसँग मात्र १२ महिनामै सेक्सबाट बोर हुने गर्छन् । लामो समयसम्म सम्बन्धमा बसेपछि महिलाले सेक्सलाई त्यति महत्व दिदैनन् । क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालय, सन फ्रान्सिस्कोका वैज्ञानिक र साउथह्याम्प्टन यूनिभर्सिटीका अध्ययनकर्ताले संयुक्त रुपमा उक्त अध्ययन गरेका छन् । अध्ययनकर्ताले लण्डनका ११ हजार ५ सय ८ जनामा गरेको अध्ययनमा महिलामा सेक्सप्रति रुची […]
महिला र सेक्सवारे उपयोगी नयाँ तथ्य सार्वजनिक
सेक्स पुरूषको तुलनामा महिलामा फरक देखिएको छ । महिला पुरुषको तुलनामा ढिलो सन्तुष्टि हुने गरेको पाइन्छ । सुत्नासाथ पुरूष सेक्स इच्छा जाहेर गर्छन भने महिलाहरू ढिलो सेक्सको चाहना गर्दछन् । यौन स्वास्थ नामक खोजबाट अमेरिकी युनि भर्सिटीले सेक्सको सन्तुष्टीमा महिला र पुरुषमा व्यापक अन्तर रहेको नयाँ प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन् । अध्ययनले देखाए अनुसार महिलाहरु […]
सेक्समा हुने कमजोरी र यसको उपचार
सेक्स कमजोर हुनाले पारिवारिक जीवन सफल नहुने देखिन्छ । हामीले यस विषयमा लामो अनुभव बटुलेका छौं । नियमित यौन क्रियाकलापमा सामेल व्यक्ति र सामेल हुन नपाएको व्यक्ति बीचको व्यवहारमा निकै फरक हुन्छ । खाना जति आवश्यक छ त्यति नै सेक्सको पनि आवश्यक छ जीवनमा । यौंन शक्ति बढाउनका लागि तपाईले विभिन्न खालको औषधी उपचार गराउने […]
धेरै महिला पुरुषहरुमा महिनावारी अर्थात मिन्स भएको बेला यौन सम्पर्क गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने बारेमा जिज्ञासा रहने गरेको छ । तर यसका बारेमा वैज्ञानिकहरुले भने फरक धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । उनीहरुले गरेको अधययन अनुसार महिनावारीको बेलामा यौन सम्पर्क गर्न मिल्छ । तर, सुरक्षित सम्पर्कमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ । कन्डम लगाएर यौन सम्पर्क गरेमा संक्रमणबाट […]
सेक्सबिना एक घण्टा पनि बस्न सक्दिनन् यी नायिका
एजेन्सी, बलिउड अभिनेत्री भूमि पेडनेकरले अभिनेत्री नेहा धुपियालाई दिएको अन्तरवार्ता निकै चर्चित भएको छ । वास्तवमा ‘दम लगा के हईशा’ र ‘शुभ मंगल सावधान’ मा सँगै काम गरिसकेका आयुष्मान खुराना र भूमि पेडनेकर एक अर्काबारे धेरै नै जानकार छन् । र त टिभी शो बीएफएफ वोगमा एक–अर्काबारे खुलासा गरिरहेका थिए । नेहाले एउटा प्रश्न सोधेकी […]
पढ्नुहोस्, सेक्स गर्दा विचार गर्नुपर्ने महत्वपुर्ण कुराहरु
एजेन्सी, हरेक मानिसको जीवनमा सेक्स अति आवश्यक पर्छ । तर हाम्रो समाजमा यसलाई त्यति सहजले लिएको छैन । सेक्स भन्ने शब्द सुन्दा मात्र पनि अचम्म र नराम्रो ठान्ने प्रचलन अहिलेसम्म पनि सिमित नै छ । तर यो मानिसको लागि अति आवश्यक छ । मानिसको लागि शिक्षा, स्वास्थ्यको जसरि आवश्यक हुन्छ । यो पनि त्यसरी नै […]
सेक्स गर्दा जीवनमै धेरै सुख प्राप्त गर्नको लागि योनी कसिलो बनाउने तरिका
यौनसम्पर्क गर्दा धेरै युवाहरुको जिज्ञासा भनेको योनी किन खुकुलो हुन्छ ? के कारणले खुकुलो हुन्छ अनि कसरी यसलाई कसिलो बनाउन सकिन्छ ? भन्ने हुन्छ । तपाईहरु दुईजना जो यौनसम्पर्कमा सहभागि हुनुहुन्छ तपाईहरु कत्तिको सहज तरिकाले यौन क्रियाकलापमा सहभागि हुनुहुन्छ भन्ने कुराले धेरै प्रभाव पार्छ । यौन सम्पर्कको बेलामा योनीका मांशपेशीहरु संकुचन गर्ने अथवा फुक्ने कुराहरु […]
हरेक मानिसको जीवनमा सेक्स अति आवश्यक पर्छ । तर हाम्रो समाजमा यसलाई त्यति सहजले लिएको छैन । सेक्स भन्ने शब्द सुन्दा मात्र पनि अचम्म र नराम्रो ठान्ने प्रचलन अहिलेसम्म पनि सिमित नै छ । तर यो मानिसको लागि अति आवश्यक छ । मानिसको लागि शिक्षा, स्वास्थ्यको जसरि आवश्यक हुन्छ । यो पनि त्यसरी नै आवश्यक […]
बिहानको समयमा सेक्स गर्दाका फाईदाहरु
एउटा अध्ययनले देखाए अनुसार बिहानको समयमा सेक्स गर्दा उत्तम मानिन्छ, बिहानको समयमा पूजापाठ गर्ने, खाना पकाउने, अफिस जाने तयारी आदि गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि त्यसको लागि प्रयाप्त समय छ र पार्टनर टेन्सनमा छैन भने विहानमै सेक्स गर्दा राम्रो । विहानको समयमा सेक्सको साथसाथै पार्टनरसँगै बाथरुममा ‘शावर’मा नुहाउदै मजा लिन पनि सकिने विज्ञहरुको भनाइ छ । […]
सेक्स सम्बन्धी अत्यन्त उपयोगी जानकारी
सेक्स गर्ने समयमा भुलेर पनि गर्न नहुने कुराहरु
सुरक्षित यौन सम्पर्क गर्नु स्वास्थ्यका लागी लाभदायक मानिन्छ । हामीले यौन सम्पर्क गर्नुको मुख्य दुई कारण छन् । प्रजनन मार्फत मानव सभ्यतालाई निरन्तरता दिनुका साथ साथै आनन्द प्राप्तिका लागि यौन सम्पर्क गरिन्छ । यौन सम्पर्क गर्दा शरीरमा प्रतिरोधात्मक क्षमतामा वृद्धि, रक्तचाप नियन्त्रण र तनाव कम हुने जस्ता थुप्रै फाइदाहरू छन् । नियमित यौन सम्पर्क गर्दा […]
थाहा पाउनुहोस्,सेक्स कतिबेला र कतिपटक गर्ने ?
उपयुक्त समय र परिस्थिति अनुसार सेक्स गर्न सकिन्छ । अधिकांशले रातिमा सेक्स गर्छन् । तर, रातिमा भन्दा विहानको समयमा सेक्स गर्दा बढि राम्रो मानिन्छ । एकाविहानै सेक्स गरे दिनभरी ‘मुड फ्रेस’ हुन्छ । अरु यस्ता कारण पनि छन्, जसले तपाईंलाई विहानकै समयमा सेक्स गर्न उत्साह पैदा गर्न सक्छ । एउटा मात्र होइन, धेरै किसिमका सोध […]
यस्ता छन्, युवतीले सेक्सको बारेमा सोच्ने रोचक तथ्यहरु
थाहा पाउनुहोस्, सेक्स गर्दा कस्तो हुन्छ यौनाङ्गको अवस्था
सेक्स गर्नु अघि खान नहुने कुराहरु
दम्पतीहरूले यौन सन्तुष्टि प्राप्त नगर्नुमा शिघ्र स्खलन एक हो | तर कारण यो मात्र छैन | विर्य चाडो स्खलन हुन्छ भने पनि तपाईं यौन सुख प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ | एक अन्तराष्ट्रिय सस्थाले गरेको अनुसन्धानानुसार योनीमा लिङ्ग प्रवेश गराएको दुई मिनेटमै ७५ प्रतिशत पुरुषले चरमआनन्द प्राप्त गरेको बताएका थिए । सामान्यत: उमेर बढ्दै जाँदा समय केही […]